Post-baby belly ကလေးမွေးပြီးဗိုက် - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
ဆရာ အသက်က ၂၇ပါ။ ကလေးခွဲမွေးထားတာ ၁၃ရက်ရှိပါပြီဆရာ။ မွေးပြီ ဗိုက်ပူနေပါတယ်ဆရာ။ ဗိုက်ပြန်ချက်အောင် ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမလဲဆရာ။ ပထမဆုံးကလေးဆိုတော့ မလုပ်တတ်မကိုင်တက်လို့ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။
ကလေးမွေးပြီးနောက် ဗိုက်စူဖေါင်းပျော့လာတယ်။ တချို့မှာ ကိုယ်ဝန် ၆ လတုန်းကလိုထင်ရတယ်။ ရင်းစားပြန်ရဘို့ အချိန်ယူတယ်။ ဆောရီး။
ကလေးမွေးပြီးတာနဲ့ များခဲ့တဲ့ဟော်မုန်းတွေက ကျလာတယ်။ သားအိမ်ကနဂိုလိုပြန်ဖြစ်ဘို့ ၄ ပတ်လောက်ကြာတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်က ကိုယ်ထဲကရှိသမျှဆဲလ်တွေ ဖေါင်းရောင်ခဲ့တယ်။ အဲတာတွေပြန်ကျလာပါမယ်။ အဆီပိုစုခဲ့တာတွေလည်း နည်းနည်းလာမယ်။ ကလေးကိုနို့တိုက်သူနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သူတွေက ပိုသိသာမယ်။ အဲတာလည်း အချိန်ယူပါမယ်။ စိတ်ရှည်ပါ။
Linea nigra ခေါ် ချက်ကနေ ဆီးစပ်ကိုတန်းနေတဲ့ အရောင်ရင်ုမျဉ်းကြောင်းရှိမယ်။ Stretch marks ခေါ် အကြောပြတ်တာတွေလည်း ဗိုက်၊ ပေါင်နဲ့ ရင်သားနေရာတွေမှာ ကျန်နေရစ်တာ တွေ့ပါမယ်။ အချိန်ယူပြီး ပါးလာမယ်။ ပျောက်နိုင်တာတွေပျောက်ကုန်ပါမယ်။ အကြောပြတ်တာတွေ အကုန်မပျောက်ပါ။ ဆောရီး။
အရင်ကလိုအနေအထား ဘယ်တော့ပြန်ရောက်နိုင်သလဲ။ ကိုယ်ဝန်မဆောင်ခင်က ဘယ်လိုရှိခဲ့သလဲ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တော့ အလေးချိန်ဘယ်လောက်တိုးခဲ့သလဲ။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု နည်းသလား။ သားဦးလား။ ကလေးထွားခဲ့သလား။ အမွာလား။ ဗိုက်ကြွက်သားတွေအားနည်းသလား။ နေတာထိုင်တာ ပုံမှန်နေထိုင်ခဲ့သလား။
ကလေးနို့တိုက်ရင် တနေ့မှာ ကယ်လိုရီ ၅ဝဝ နည်းစေလို့ ကောင်းတယ်။ တပတ်မှာ ၂ ပေါင်နည်းနိုင်တယ်။ အစားအသောက်မှာ ကယ်လိုရီများတာရှောင်ပါ။ အသီးနေ့တိုင်းစားပါ။ ဟင်းသီးဟင်ရွက်စိုစိုစိမ်းစိမ်းပါပါစေ။ အဆီပါတာ ရှောင်ပါ။ ပိုတက်ဆီယမ်း မနည်းစေရ။ အစာအာဟာရအကြောင်း၊ ဓါတ်ဆားတွေနဲ့ ဗီတာမင်တွေအကြောင်း ဘလော့မှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်ပြီးနဲ့ ကလေးမွေးပြီး လေ့ကျင်ခန်းတွေလည်းရှိတယ်။ ဖတ်ပါ။ လိုက်နာပါ။ လေ့ကျင့်ခန်း လင့် ပေးထားပါတယ်။
1. Exercise after giving birth ကလေးမွေးပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2015/12/exercise-after-giving-birth.html
2. Exercise after Surgery ခွဲစိတ်ထားပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/after-surgery.html
3. Minerals ဓါတ်ဆားများ https://doctortintswe.blogspot.com/2016/02/minerals.html?q=Minerals
4. Nutrition အာဟာရ https://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/nutrition.html
5. Postnatal exercises: abdominals https://www.babycentre.co.uk/a1052298/your-post-baby-belly-why-its-changed-and-how-to-tone-it
6. Postpartum ကလေးမွေးပြီးချိန် https://doctortintswe.blogspot.com/2016/06/postpartum.html
7. Stretch Marks အကြောပြတ်ခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/stretch-marks.html